सड्क डिभिजन कार्यालयको ढिलासुस्तीले गल्कोट गौदी खोलाको पुल निर्माण कार्य रोकियो ! – ebaglung.com
सड्क डिभिजन कार्यालयको ढिलासुस्तीले गल्कोट गौदी खोलाको पुल निर्माण कार्य रोकियो !
२०७५ बैशाख २०, बिहीबार २०:४२	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट २०७५ बैशाख २० । सड्क डिभिजन कार्यालयले पुल निर्माणका लागी प्रयोग गरिने बेरिङ ल्याउने अनुमति नदिँदा गल्कोटमा निर्माणाधीन गौदी खोलाको मोटरेबल पुल निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
नयाँ बाटो जुल्मी आचार्य जेबि निर्माण कम्पनीले गत २०७३ साल पुस महिना देखि गल्कोटको हटिया र हरिचौर जोड्ने गौदी खोलाको मोटरेबल पुलको ठेक्का सम्झौता गरि काम अगाडि बढाएको महिना देखि सड्क डिभिजन कार्यालयमा बेरिङको माग गर्दै आईरहेको भए पनि सुनुवाई नभएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक कुमार खड्काले बताए । खड्काले दिएको जानकारी अनुसार बेरिङ भारतबाट ल्याउनुपर्ने र सडक डिभिजन कार्यालयले अनुमति नदिएसम्म काम अगाडि बढाउन नसकिने उनको भनाई छ ।
अझै करिब १ महिना बेरिङ ल्याउन लाग्ने र बेरिङ ल्याउने सहमति भएको २८ दिनपछि मात्रै निर्माण कार्य सुरु गरिने खड्काले बताए । सड्क डिभिजन कार्यालयको ढिलासुस्तीका कारण निर्माण कार्य सम्पन्न गनुपर्ने समय अवधि सकिएपछि कम्पनीले ६ महिना थप गरेको छ ।
खड्काका अनुसार आगामि माघ महिनासम्म निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउदै बर्षातको समय भएका कारण अहिले स्ट्रक्चरको काम सक्ने र आगामि मंसिर महिनामा स्लेबको काम गर्ने जानकारी दिए । सडक डिभिजन कार्यालयले ढिलासुस्ती नगर्दिएको भए गत माघ फागुन महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न भईसक्ने खड्काले दाबी थियो ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बागलुङमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना !
ताराखोला गाउपालिकाका वडा सचिव गौतमको बिदाईमा सबैको आँखा रसाए !